Tag: automatisation marketing | Martech Zone
Tag: automatisation marketing
Inona ny atao hoe MarTech? Teknolojia marketing: lasa, ankehitriny ary ho avy
Sabotsy, Martsa 27, 2021 Alahady 11 aprily 2021 Douglas Karr
Mety hahazo tsikombakomba amiko ianao amin'ny fanoratana lahatsoratra ao amin'ny MarTech taorian'ny namoahana lahatsoratra 6,000 momba ny haitao marketing nandritra ny 16 taona (mihoatra ny taonan'ity bilaogy ity… teo amin'ny bilaogera teo aloha aho). Mino aho fa mendrika ny mamoaka sy manampy ireo matihanina amin'ny fandraharahana hahatakatra bebe kokoa ny momba ny MarTech, ny ankehitriny ary ny hoavin'ny ho avy. Voalohany, mazava ho azy, ny MarTech dia portmanteau an'ny marketing sy teknolojia. Malahelo be aho
Moosend: Ny endri-barotra automatique rehetra hananganana, hizaha toetra, hanarahana lalana ary hampitomboana ny orinasanao
Talata, Febroary 23, 2021 Talata, Febroary 23, 2021 Douglas Karr
Lafiny iray mahaliana amin'ny indostria misy ahy ny fanavaozana mitohy sy ny fidinan'ny vidin'ny fidiram-bola ho an'ireo sehatra fanaovana automatisation tena be pitsiny. Ny toerana nandanian'ireo orinasa an'arivony dolara (ary mbola anaovany) ho an'ny sehatra lehibe… ankehitriny dia nidina be ny vidiny raha toa ka mihatsara hatrany ireo sanganasa. Vao haingana izahay no niara-niasa tamin'ny orinasa mpanatontosa lamaody orinasa izay vonona hanao sonia fifanarahana ho an'ny sehatra iray izay handoa azy ireo mihoatra ny antsasaky ny iray tapitrisa dolara
Fanovana nomerika: Rehefa miara-miasa ireo CMO sy CIO dia mandresy ny rehetra
Alarobia 20 Janoary 2021 Alarobia 20 Janoary 2021 Bonnie Crater
Nanafaingana ny fanovana nomerika tamin'ny taona 2020 satria tsy maintsy. Ny areti-mandringana dia nahatonga ny protokolota lavitra ary ilaina ny fikarohana momba ny vokatra an-tserasera sy ny fividianana orinasa sy mpanjifa. Ireo orinasa izay tsy mbola nanana fanatrehana nomerika matanjaka dia voatery namolavola haingana, ary nifindra ny mpitarika ny orinasa hanararaotra ny onjan'ny fifandraisana nomerika noforonina. Marina izany tao amin'ny habaka B2B sy B2C: ny areti-mandringana dia mety manana tondrozotra fanovana nomerika mandroso haingana
ShippingEasy: Ny vidin'ny fandefasana, ny fanarahan-dia, ny fametahana marika, ny fanavaozana ny toe-javatra ary ny fihenam-bidy ho an'ny e-varotra
Talata, Janoary 5, 2021 Alakamisy Febroary 18, 2021 Douglas Karr
Misy fahasarotan'ny taonina miaraka amin'ny ecommerce - manomboka amin'ny fanodinana fandoavam-bola, ny logistika, ny fanatanterahana hatramin'ny alàlan'ny fandefasana sy ny fiverenana - izay manambany ny ankamaroan'ny orinasa rehefa mandray ny orinasan-tserasera izy ireo. Ny fandefasana dia, angamba, iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny fividianana an-tserasera - ao anatin'izany ny vidiny, ny daty andefasana ary ny fanarahana. Ny vidin'ny fandefasana, haba ary sarany fanampiny dia tompon'andraikitra amin'ny antsasaky ny kalesy fiantsenana nilaozana. Ny fanaterana miadana dia tompon'andraikitra amin'ny 18% amin'ny fiantsenana nilaozana
Omnisend: Sehatra mora ampiasaina amin'ny automatisation amin'ny mailaka ecommerce & SMS marketing
Talata, Desambra 29, 2020 Talata, Janoary 12, 2021 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo fandrosoana mahaliana indrindra amin'ny automatisation marketing amin'ity taona ity, araka ny hevitro, dia ny fampiroboroboana vahaolana mora vidy hametrahana automatique ny varotra ecommerce anao. Ireo vatan'ny varotra nentim-paharazana nentim-paharazana dia tokony hampidirina ary avy eo ny fampandrosoana tsirairay dia mandroso rehefa mandeha ny fotoana - ny fanatanterahana dia afaka herinandro na volana vao afaka manomboka mahita vola. Ankehitriny, ireo sehatra vaovao ireo dia tsy nanana fampidirana novokarina fotsiny, fa manana fanentanana izay vonona ny handefa azy ireo vantany vao